ဘယ်ဘက်လက်ထဲကနေ အိပ်ထဲ သို.
တာရာမင်းဝေ က ပုံပြင်အချို.ကို ဘယ်ဘက်လက်ထဲမှာဝှက်ထားလိုက်တယ်။ ကျနော်တို.ကဘယ်ဘက်လက်ထဲမှာဝှက်ထားလိုက် တဲ့ပုံပြင် ကို ရှာကြည့်မယ်.ပြီးရင် ရွှေ.နိုင်တဲ့သူက အဲ့ပုံပြင်ကို ကွန့်ပြီး အင်္ကျအိပ်ထဲပြောင်းကြည့်ကြမယ်လေ။ကောင်းဘူးလား။စရအောင်၁။နတ်မင်းရီသံ တစ်ခါက ရွာတစ်ရွာ ၇ဲ့တောစပ်မှာ ညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်တဲ့။အဲ့အောက်မှာ နတ်ကွန်းကြီးလည်းရှိတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကလည်းအဲ့နတ်ကွန်းမှာပူဇော်ပသကြပါတယ်။အဲ့ရွာကြီးမှာ မြို.နဲ့ ဆက်သွယ်ဖို.ဖောက်လက်စလမ်းလည်းရှိတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ လူမညီတော့ လမ်းကလည်း မပြီးဘူးပေါ့။အဲ့လမ်းကိုလည်းမသုံးကြဘူး။နတ်ကွန်းရှေ့က တောလမ်းအတိုင်းပဲ မြို.တွေဆီကို သွားကြလာကြတယ်။ တနေ့မှာ ရွာသားကြီးတစ်ယောက်ဟာ မြို.မှာကျောင်းထားဖို.အတွက် သားလက်ကိုဆွဲပြီး တော လမ်းအတိုင်း တက်လာတယ်။နတ်ကွန်းရှေ့က အဖြတ်မှာ နတ်ကြီးက ထရပ်တယ်။ ဖခင်ဖြစ်တဲ့ ရွာသား ကြီးဟာအံ့သြတာနဲ့အမျှ ပီတိလည်းဖြစ်ရတယ်။နတ်ကြီးကတောင် ထပြီးအ၇ိုသေပေးရတယ်ဆိုတော့ အထွတ်အတိပ်ရောက်မဲ့သားပဲပေါ့။အဲ့လိုနဲ့ မြို.ကကျောင်းမှာ သားကိုထားခဲ့ပြီး မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းကြီးမားခဲ့ရတယ်။ဒီလိုနဲ့ နှစ်တွေကြာလာခဲ့တယ်။သားရွာကိုပြန်လာတိုင်း နတ်မင်းက ထရပ် ပေးဆဲပါပဲ။တနေ့တော့ မြို.ကနေ သားရဲ့သီတင်းတစ်ခု ဖခင်ဆီရောက်လာပါလေရော။'ခင်ဗျားသားတော့ မြို.မှာနာမည်ကျော်နေပြီ' ရွာသားကြီး ၀မ်းသာသွားတာပေါ့။ ' ဟုတ်လား ပြောစမ်းပါဦး ' ပေါ့ 'စောရ ကြီးတစ်ယောက်အဖြစ် နာမည်ကျော်နေတာလေ' 'ဘာဗျ' 'ဟုတ်တယ် အခု ဖမ်းမိလို. ထောင်ထဲရောက်နေပြီလေ' ရွာသားကြီးဟာပေါက်ကွဲ ပြီး မြို.တော်ကို လိုက်သွားပါတယ်။ဟုတ်ပါ့ဗျာ .သူ.သားက အကျဉ်းစံနေရပြီ။၀မ်းနည်းပြီးရွာပြန်လာတဲ့ ရွာသားကြီးဟာနတ်ကွန်းရှေ့အရောက် မှာ ပေါက်ကွဲ ပါတော့တယ်။နတ်ကြီး ကို လက်ငြိုးငေါက်ငေါက်ထို.ပြီး၇န်တွေ့ပါတော့တယ်။ 'သင်ဟာလူလိမ်လူညာပဲ' နတ်ကြီးက အဲ့အားသင့်ပြီး ' ကျုပ်က နတ်ပဲလေ ဘာလို.လူလိမ်၊လူညာဖြစ်ရမှာလဲ''ဒါဆို နတ်လိမ် နတ်ညာပဲ''အလို ဘာဖြစ်လို.ပါလိမ့်''ကျုပ်သားလာတိုင်း ခင်ဗျားက မပ်တပ်ရပ်ပြီး အ၇ိုအသေပေးတယ်.ကျုပ်သားကပဲ ကြီးမြတ်သူဖြစ်လာမှာ ကျနေတာပဲ။အခုတော့ သူခိုးကြီးဖြစ်သွားပြီဗျ။'နတ်ကြီးက အော်ရီပါတယ်။"ဘယ်က ခင်ဗျားသားကို ကျုပ်က အ၇ိုအသေပေးရမှာလဲ။သူက သူခိုးဇာတာပါလို. ကျုပ်နတ်ကွန်းကရှိတာလေးကို"မ"သွားမှာဆိုးလို. ထထ ရပ်ကြည့်နေတာဗျ""ခင်ဗျားဗျာ ဘာပဲပြောပြော ခင်ဗျားမကောင်းဘူး" အဲ့ချိန်မှာရွာလူကြီးက သူတို.အနားရောက်လာတယ်။"ဘာဖြစ်နေတာလဲ" သူတို.က အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြတယ်။ရွာသူကြီးက အသေအချာနားထောင်ပြီးအတော်ကြာအောင်စဉ်းစားတယ်။နောက်မှ နတ်ကြီးကို"ဒီလိုလုပ်ပါ။နောကfဆို အသင်နတ်မင်းက လူဆိုးလို.တွေ့ရင် လူဆိုးလို.အော်ပေးပါ""အို.. အဲ့လိုတော့ ကျုပ်က သူများမကောင်းကြောင်းကိုမပြောချင်ဘူး။ဒီလိုလုပ်မယ်။လူဆိုးတွေ့ရင်ဘာမှမအော်ဘူး။လူကောင်းတွေ့ရင်လူကောင်းပါလို.အော်ပေးမယ်၊ဟုတ်ပလား""အင်းအဲ ... ဟိုကောင်းပြီလေ" သူကြီးအိမ်မှာနောက်တစ်နေ့အစည်းအဝေးလုပ်တော့ သူကြီးက ရွာသားတွေကိုအဲ့ဒီအကြောင်းတဆင့်ပြန်ရှင်းပြတယ်။၇ွာသားတွေက အင်းမလုပ်အဲ့မလုပ်ပဲ။"ငါပြောတာကို ကြားကြလား""ကြားပါတယ်" အစည်းအဝေးပြီးချိန်မှာ ရွာသားတွေမျက်နှာမအီမသာနဲ့ပြန်သွားတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကို နောက့်နေ့မှာ ကြုံရတော့တာပါပဲ။နှစ်ပေါင်းများစွာပစ်ထားတဲ့လမ်းဟောင်းကြီးကို ပြုပြင်ပြီး ရွာသားတွေ စုပေါင်းဖောက်လုပ်ကြတယ်။တောလမ်းအတိုင်း နတ်ကွန်းကြီးရှေ့ကဖြတ်သွားဖို. အလုပ်ကို ဘယ်သူမှမလုပ်တော့ဘူး မြို.သွားလမ်းကြီးပြီးသွားတယ်။အဲ့ဒီလမ်းမအတိုင်းပဲသွားကြတယ်။နတ်ကွန်းရှေ့ကဘယ်သူမှမဖြတ်တော့ဘူးနတ်ကြီးလည်းနားလည်ရခက်သွားတယ်။ "လူကောင်းကို လူကောင်းလို.အော်ပေးပါမယ်ပြောတာ ဘာကိစ္စ ငါ့ရှေ့က မဖြတ်ရဲကြတာလဲ" "ဘာဖြစ်လို.လဲ" "ဘာကြောင့်လဲ" နတ်ကြီးစဉ်းစားပါတယ်။နေ့ရက်အတန်ကြာပြီးတော့မှ "ဟားဟားဟားဟား" နတ်ကြီးထရယ်ပါတယ်။အူလှိုက်သည်းလှိုက်ကိုရီတာပါ။ "ဟားဟားဟားဟားဟား" ဘာတွေသဘောပေါက်ပြီး နတ်ကြီးထရယ်တာလဲ မသဲကွဲပါဘူး။ဒါပေမဲ့ အချို.လူတွေရဲ့နားထဲမှာတော့ အ့ဒီနတ်မင်းရီသံကို ဒီနေ့ထိနားထဲစွဲနေတုန်းပဲလို.သိရပါတယ်။ကဲ ပုံပြင်လေးကတော့ဒါပါပဲ.နတ်ကြီးဘာလို.ရီတာလဲဆိုတာ သယ်ချင်းတို.ပြောပြပါဦးသိရင် ။:D
Fri SWAR LAEH ပြောတာလေးပြန်ပြောပြတာပါ။> ဘ၀ဆိုတာ...>> Life is an opportunity, benefit from it. > ဘ၀ဆိုတာ အခွင့်အရေး... အကျိုးရှိအောင်လုပ်ပါ...> Life isabeauty, admire it. > ဘ၀ဆိုတာ အလှတရား... လေးစားပါ...> Life isadream, realize it. > ဘ၀ဆိုတာ အိမ်မက်.... လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်ပါ..> Life isachallenge meet it. > ဘ၀ဆိုတာ စိန်ခေါ်မှူ... ရင်ဆိုင်ပါ...> Life isaduty, complete it. > ဘ၀ဆိုတာ တာဝန်... ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ပါ...> Life isagame, play it.> ဘ၀ဆိုတာ ကစားပွဲ... ကစားပါ...> Life isapromise fulfill it. > ဘ၀ဆိုတာ ဂတိ... ဖြည့်ဆည်းပါ...> Life is sorrow, overcome it. > ဘ၀ဆိုတာ ၀မ်းနည်းမှု... ကျော်လွှားပါ...> Life isasong, sing it. > ဘ၀ဆိုတာ သီချင်း... သီဆိုလိုက်ပါ....> Life isastruggle, accept it. > ဘ၀ဆိုတာ ရုန်းကန်မှု... လက်ခံပါ....> Life isatragedy confront it. > ဘ၀ဆိုတာ အလွမ်းဇတ်လမ်း... ရင်ဆိုင်လိုက်ပါ...> Life is an adventure, dare it. > ဘ၀ဆိုတာ စွန့်စားခန်း... ရဲရင့်လိုက်ပါ...> Life is luck, make it. > ဘ၀ဆိုတာ ကံကောင်းမူ... ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ...> Life is life, fight for it." > ဘ၀ဆိုတာ ဘ၀... ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ပါ...
# Thanks to Original Writer n Friend who send this to meရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာဒုံလေယျာဉ်ကွင်းတွင်............... အင်္ဂလန်သို့ပညာတော်သင်သွားရန်အတွက်အစိုးရမှလွှတ်သောမမိုမိုကို ယောင်္ကျားဖြစ်သူကိုလှထွန်းမှလိုက်ပို့ရင်းနှုတ်ဆက်စဉ်.......မမိုမို................."အကိုရေကလေးတွေကိုဂရုစိုက်ဦးနော်.."ကိုလှထွန်း.........."စိတ်ချပါကွာဒါနဲ့မင်းပြန်လာရင်အင်္ဂလန်ကဘိုမတစ်ယောက်လောက် သယ်ခဲ့ဟေ့...အဖြူမလေးတွေအရမ်းမိုက်တယ်လို့ပြောသံကြားဖူးတယ်..ဟား ဟား ဟား....."မမိုမိုမှာလွန်စွာအစအနောက်သန်သောယောင်္ကျားဖြစ်သူကိုလှထွန်းအား မျက်စောင်းထိုးကြည့်ရင်းလေယျာဉ်ပျံဆီသို့ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်.................၅လခန့်အကြာ မမိုမိုအထုပ်အပိုးလက်ဆောင်များနှင့်ပြန်လာစဉ်....မင်္ဂလာဒုံလေယျာဉ်ကွင်းတွင် ကိုလှထွန်းမှလာကြိုပြီး...........ကိုလှထွန်း..........."ဟား....မိန်းမရေ..လွမ်းလိုက်တာကွာ...ကလေးတွေကလည်းသတိရနေကြတယ်ငါကတော့ပိုပြီးသတိရတာပေါ့ကွာ..ဟီးဟီး...ဒါနဲ့ ငါမှာလိုက်တဲ့ ဘိုမလေးရော...."မမိုမို.................."အင်း..ဘိုထီးလေးပဲဖြစ်မလား.....ဘိုမလေးပဲဖြစ်မလားတော့မသိဘူး....ကျွန်မလဲတွေ့သမျှဘိုတွေနဲ့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားတာပဲ...နောက် ၁၀လလောက်မှသိရမယ်ထင်တယ်.....ဟင်း.ဟင်း...အခုတော့မသိသေးဘူး..."ကိုလှထွန်း............"အမ်..."နယူးယောက်က ဦးကျောက်ကျနော်တော့် မလိုချင်ဘူးနော် :P
အသက်ကယ် ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ရှင်သန် ရုန်းကန် နိုင်ဖွယ်ရာ အရေးပေါ် အထောက်အကူ ပစ္စည်း ဖြစ်နိုင်ပါသတဲ့။ (၁) အရေးပေါ် အတွက် keypad ကို locked လုပ်ထားရင်တောင် သင့် လက်ကိုင်ဖုန်းများဟာ 112 ဆိုတဲ့ နံပါတ်ကို နှိပ်လို့ ရတာ တွေ့ရ ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီနံပါတ်ဟာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၊ နိုင်ငံတကာ အရေးပေါ် ဖုန်းနံပါတ် ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သာ လက်ကိုင်ဖုန်း ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ ဧရိယာထဲမှာ ရှိနေပါစေ၊ ဒီနံပါတ်ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ သင့်လက်ကိုင်ဖုန်းဟာ အနီးဆုံး ဆက်သွယ်မှု ကွန်ယက်ကို အလိုအလျောက် ရှာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ကိုင်ဖုန်းက ခလုတ်များကို ပိတ်ထားရင်တောင် ဒီနံပါတ်ကိုတော့ နှိပ်လို့ ရနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယုံဘူးလား .. စမ်းကြည့်.. (၂) ကားထဲမှာ သော့တွေ ကျန်ခဲ့လားသင့်ကားတံခါးမှာ အဝေးထိန်းစနစ် ရှိပါသလား။ တနေ့မှာ အဝေးထိန်း မဟုတ်ဘဲ လက်နဲ့ ဖွင့်ရမယ့် အနေ အထား ကြုံတတ်ပါတယ်။ ကားသော့ကို ကားထဲ ထည့်ခဲ့ပြီး အပိုသော့က အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့ရင် လက်ကိုင်ဖုန်း တစ်လုံး ရှိရတာ ဒီလိုအခါ ကျတော့ ကောင်းလိုက်တာ။ အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ လူရဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းကို သင့်လက်ကိုင်ဖုန်းကနေ ခေါ်ပါ။ တဖက်က ပြန်ထူးနေရင် သင့်လက်ကိုင်ဖုန်းကို ကားတံခါးကနေ ခြေတလှမ်းအကွာမှာ ထားပါ။ နောက်ပြီး အိမ်ကလူကို ကားသော့ဖွင့်တဲ့ ခလုတ်ကို လက်ကိုင်ဖုန်းနားကပ်ပြီး နှိပ်ခိုင်းပါ။ ဟဲဟဲ.. စမ်းကြည့်ရတာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ပျော်စရာပဲ မဟုတ်လား။ သူများတွေ စမ်းကြည့်တာ အောင်မြင်တယ်လို.ပြောတာပဲ။ အိမ်ကလူက လာပေးစာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ အကွာအဝေးက အရေး မဟုတ်ပါဘူး။ သော့အပိုက မိုင်တရာ အကွာမှာ ရှိနေပါစေ ခုနက နည်းနဲ့ သင့်ကား တံခါးကို အလွယ်တကူ ဖွင့်နိုင်တာ သင့်လက်ကိုင်ဖုန်းကြောင့်ပါ။ (၃) ဖွက်ထားတဲ့ အပို ဘက္ထရီသင့်လက်ကိုင်ဖုန်း ဓာတ်အား သိပ်နည်းလာပြီဆိုပါစို့။ *3370# ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ သင့် လက်ကိုင်ဖုန်းက အရေးပေါ်သုံး ချန်ထားတဲ့ ဓာတ်အား ကို ပြန်ဖွင့်ပေးပြီးနောက် သင့်လက်ကိုင်ဖုန်းက ဓာတ်အား ထက်ဝက် ကျန်သေးကြောင်း ပြပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် သင့်လက်ကိုင်ဖုန်းကို ဓာတ်အား ပြန်ဖြည့်တဲ့အခါမှာ သာမန်နဲ့ အရေးပေါ်သုံး နှစ်မျိုးလုံး အတွက် ဓာတ်အားကို ပြန်ဖြည့်ပါလိမ့်မယ်။ Safety first !!! ပါတဲ့။ (၄) အခိုးခံရတဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းကို သူတပါး သုံးလို့ မရတော့အောင် ဘယ်လို ဖျက်ဆီး ပစ်မလဲ။သင့် လက်ကိုင်ဖုန်းရဲ့ နံပါတ်စဉ်ကို သိဖို့ *#06#ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဂဏန်း ၁၅လုံး (ဆယ့်ငါးလုံး) ပေါ်လာပါ လိမ့်မယ်။ အဲဒီ ဂဏန်း ဆယ့်ငါးလုံးဟာ သင့်လက်ကိုင်ဖုန်း (handset) အတွက် သီးသန့်ပါ။ ဒီ ဂဏန်းတွေကို ချရေးပြီး လုံခြုံ စိတ်ချရတဲ့ တနေရာမှာ သိမ်းထားပါ။ သင့်ဖုန်း အခိုးခံရတဲ့ အခါမှာ သင်ဟာ ဖုန်း ကုမ္ပဏီကို ဖုန်းဆက်ပြီး ဂဏန်း ဆယ့်ငါးလုံးပါ ကုဒ်ကို ပြောပြ တိုင်တန်းလိုက်ပြီး သင့် လက်ကိုင်ဖုန်းကို ပိတ်ခိုင်း နိုင်ပါ တယ်။ တကယ်လို့ သူခိုးဟာ Sim Card ကို မထုတ်ရသေးမီ သင်သာ တိုင်တန်းနိုင်မယ် ဆိုရင် Sim card ကိုရော လက်ကိုင်ဖုန်းကိုပါ disable လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်လို့ သင့်ဖုန်းထဲက သင့်ဆက်သွယ်မှု ကွန်ယက် ထဲက သူတွေ စာရင်းနဲ့ ဖုန်းနံပါတ် များကိုလဲ သူတပါး သိခြင်းမှ ကာကွယ် နိုင်သလို သင့်အယောင် ဆောင်ပြီး သူတပါးကို သင့်ဖုန်း နံပါတ်နဲ့ ဆက်သွယ်ခြင်း ကိုပါ ကာကွယ် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင် တိုင်တန်း တာ နောက်ကျလို့ သူခိုးက ပိုလျင်သူ ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ သင့် Simcard ကိုသာ disable လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး သင် ဟာ ဖုန်းနံပါတ်များကို လက်ကိုင်ဖုန်း ထဲမှာ မှတ်သား တတ်သူ ဖြစ်ပါက သင့် ဆက်သွယ်မှု ကွန်ယက် ကိုတော့ သူခိုးက ကောင်းကောင်း သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်နံပါတ်နဲ့ သူတပါးကို ဖုန်းဆက်ခြင်းတော့ မပြုနိုင်တော့ ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အရေးကြီး ဖုန်းနံပါတ်များကို Sim Card ထဲမှာသာ မှတ်သား ထားသင့် ပါတယ်။ ဒီလို ကာကွယ် ထားနိုင်ရင် လက်ကိုင်ဖုန်း ခိုးယူခြင်း ကြောင့် အကျိုး မဖြစ်ထွန်းတဲ့ အတွက် လက်ကိုင်ဖုန်း ခိုးယူမှုများ လျော့ပါး လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးကို ၀ယ်ထားရပြီး တန်အောင် အသုံးချနိုင်ကြပါစေ။ကျနော့်လို ထပ်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ကြပါစေ။( ဖုန်းကိုကမ်းခိုင်းတာဟုတ်ဘူး ဒီအကြောင်းတွေကိုပြောတာနော်)
မြေတစ်ကွက်အတွက် သင့်တော်တဲ့ ပျိုးပင်တစ်ပင်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း မအောင်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က တောရွာတစ်ရွာမှာ ဆရာမသွားလုပ်ခဲ့တယ်။ ကျောင်းသားတွေ နားလည်အောင် စာကို ရှင်းမပြတတ်တော့ အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်။ ပါးပြင်ပေါ် ကျလာတဲ့ မျက်ရည်တွေကို> အမေက ပွတ်သပ်ပေးရင်း "သမီးနဲ့ သင့်တော်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုတော့ ရှိမှာပါ" လို့ သူ့ကို နှစ်သိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မြို့ပေါ်တက်ပြီးအလုပ်သွားလုပ်ခဲ့တယ်။ မကြာဘူး.. အင်္ကျီစညှပ်ရာမှာ နှေးကွေးလွန်းတယ် ဆိုပြီး အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရပြန်တယ်။ "မကျွမ်းကျင်သေးတဲ့ အလုပ်မှာ စစချင်း နှေးကွေးတာ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ သမီးက ဘာမှ မလုပ်ဖူးဘဲ ကျောင်းပဲတက်ခဲ့လို့ ဖြစ်လိမ့်မယ်" လို့ အမေက သူ့ကို နှစ်သိမ့်ပြန်တယ်။ အလုပ်ပေါင်းစုံ သူလုပ်ခဲ့တယ်။ အလုပ်တိုင်း တစ်ဝက်တစ်ပျက်နဲ့ ထုတ်ခံလိုက်ရတာချည်းပဲ။ စိတ်ပျက်အားငယ်ပြီး အိမ်ပြန်လာတဲ့ သူ့ကို အမေက အပြစ်မတင်ဘဲ အမြဲနှစ်သိမ့် အားပေးခဲ့တယ်။သူအသက် ၃ဝမှာ တတ်ထားတဲ့ ပညာလေးနဲ့ ဆွံအ နားမကြားကျောင်းမှာဝင်လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် မသန်မစွမ်း ကလေးတွေအတွက် ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်။ နောက်ထပ် မသန်မစွမ်းသူတွေ သုံးစွဲနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ဖြန့်ဝေခဲ့တယ်။ အခုဆိုရင် သူဟာ အောင်မြင်တဲ့ သူဌေးတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ တစ်နေ့မှာ အောင်မြင်တဲ့ သမီးတစ်ဦးက အိုမင်းနေတဲ့ အမေရှေ့မှာ ထိုင်ပြီး နှစ်ရှည်လကြာ သူသိချင်ခဲ့တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုရဲ့ အဖြေကို မေးခဲ့တယ်။ အဲတာက သူကျရှုံးနေတဲ့အချိန်၊ အနာဂတ်တွေ မဲမှောင်နေတဲ့အချိန်၊ ရှေ့ဆက်ဖို့ လမ်းတွေ ပျောက်နေတဲ့အချိန်မှာ အမေက ဘာအကြောင်းကြောင့် သူ့အပေါ် ယုံကြည်မှုတွေ ရှိနေသေးသလဲ? ဆိုတာဖြစ်တယ်။ အမေရဲ့ အဖြေက ရိုးရိုးလေးပါ။ အမေက ပြောတယ်.." မြေတစ်ကွက်မှာ ဂျုံစိုက်လို့ မဖြစ်ထွန်းရင်၊ ပဲပြောင်းစိုက်ကြည့်ပါ။ ပဲစိုက်လို့လဲ မဖြစ်ထွန်းရင် နေကြာ စိုက်ကြည့်ပါ။ နေကြာစိုက်လို့လဲ အဆံတွေ မပြည့်ခဲ့ရင် တစ်ခြားအပင် ပြောင်းစိုက်ကြည့်ပါ။ ပန်းပွင့်မှာတော့ သေချာတယ်။ မြေတစ်ကွက်အတွက် သင့်တော်တဲ့ ပျိုးပင်တစ်ပင်တော့ ရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ရိတ်သိမ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်" အမေ့ရဲ့ စကားကိုကြားတော့ သူငိုမိတယ်။ မိခင်ရဲ့ မေတ္တာ၊ ယုံကြည်မှုနဲ့ အားပေးမှုတွေက မျိုးမသန်တဲ့ ပျိုးတစ်ပင်ကိုတောင် အညှောင့်ပေါက်စေကြောင်း သူနားလည်လိုက်တယ်။ မြေတစ်ကွက်အတွက် သင့်တော်တဲ့ ပျိုးတစ်ပင်တော့ ရှိပါတယ်။ ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ သဲကန္တာရမှာ ရှားစောင်းပင်တွေတောင် လှပတဲ့အပွင့်နဲ့ ရှင်သန်ပေါက်ရောက် နိုင်သေးတယ်။ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်ဒေသပဲ ရောက်ရောက် ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့ နေရာတစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ သင့်တော်တဲ့ နေရာမှာကိုယ်တတ်စွမ်းသလောက် လှပတဲ့ အပွင့်တွေကို ဖူးပွင့်ကြရအောင်.... ဒါလေးဖတ်ပြီးတော့ နှစ်နဲ့ ချီပြီး မျက်ရည်မကျတတ်တော့တဲ့ ကျနော်တောင် မျက်ရည်ကျခဲ့မိတယ်။ဒါကြောင့်ကျနော် ပြန်လည် ကူးယူပြီး ပြန်ပြောပြတာပါ။သူငယ်ချင်းတို.လည်း စိတ်ဓါတ်ကျလာတိုင်း ဒီ အကြောင်းလေးကို သတိရပြီးတစ်စုံတစ်ရာသောအတိုင်းတာထိ သက်ရောက်မှုရှိမယ်ဆိုရင် ရေးတဲ့ သူရော ။မျှဝေတဲ့ကျနော်ပါ ကျေနပ်မိမှာပါ ။ ။
i like to play command game but sometime,i am very try for life but i am lazy sometime.i am so care all people but some time i dont care all.some time i love all people but some time i hate all people.
no matter what happend i will help all human,if i can.......:)
ကျနော်ရောက်နေကျ blog လေးတွေ
မသီတာထွေး ၊ ကျောက်နီမော်နှင့် လူမသိသေးသော ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်